‘लकडाउनलाई बाध्यताभन्दा पनि अवसर बनाऔँ’– अनिलकेशरी शाह (अन्तर्वार्ता) - Kamana News
सोमवार, चैत्र २४ २०७६
‘लकडाउनलाई बाध्यताभन्दा पनि अवसर बनाऔँ’– अनिलकेशरी शाह (अन्तर्वार्ता)
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा गर्विलो छाप छोड्न सफल अनिलकेशरी शाह हाल नबिल बैंकको सिईओको रूपमा कार्यरत छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा थोरै पनि चासो दिने हरकोहीले शाहलाई सफल सिईओ भनेर चिन्ने गर्छन् । शाहको व्यक्तित्व जति आकर्षक देखिन्छ– पोलिसी मेकिङ लेवलमा पनि उनको ज्ञानकाे सौन्दर्य उत्तिकै खुलेको देखिन्छ । शाहले भारतको दिल्ली विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरे । अमेरिकाको हार्वड विश्व विद्यालयबाट ‘२१ औं शताब्दीका लागि नेतृत्व’ विषयमा विशेष अध्ययन समेत गरिसकेका छन् । उनले जे अध्ययन गरे त्यो कुरा व्यवहारमा उतारेका छन् । उनी नेपालको वित्तीय क्षेत्रका कर्मयोगीमध्येमा पर्छन् । उनले स्टान्डर्ड चार्टड बैंक नेपालबाट बैंकिङ सेवा प्रारम्भ गरेका थिए । शाहले स्टान्डर्ड चार्टड बैंकमा १३ वर्ष गरे । मेगा बैंकको स्थापना कालदेखि नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा रही दुई कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष काम गरेका थिए । यसरी वित्तीय क्षेत्रको अनुभव प्राप्त उनी जीवनमा पनि उत्तिकै अनुभवी र परिपक्व देखिन्छन् । ‘वित्तीय क्षेत्रमा विजनेस कन्टिन्युटी प्लान र डिजास्टर रिकभर प्लान हुन्छ हामी यसैअनुसार काम गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोनाबाट सुरक्षित रहन हामी सबै घरमा बस्नुपर्छ । तर खाना सबैले खानुपर्छ, यसको लागि पैसा चाहिन्छ । त्यसैले हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकलाई हरकदम सहयोग गर्नमा खटिरहनुपर्ने हुन्छ। जति मानिस खाद्यान्न पसल, तरकारी पसल र हस्पिटल जान चाहन्छ त्यत्ति नै बैंक आउन चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा नाफामुखी होइन, सेवाप्रदायक बनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कोरोना प्रकोपका बीचमा बैंकको सेवा प्रदानको अवस्था, व्यवस्थापन, आगामी तयारी सम्बन्धमा कामना न्यूजका लागि भीमा पन्थीले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बैंकिङ क्षेत्रबाट आम ग्राहकलाई गर्विलो छाप पार्न सफल नबिल बैकले लकडाउनको समयमा कसरी सेवा प्रवाह गर्दैछ ?
नबिल बैंकले पहिला आफ्नो बैंकिङ सिस्टमलाई प्राथमिकता दिन्छ । यही कुरालाई आधार मान्दै लकडाउनको समयमा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बैंकको टिमको सुरक्षा र सरकारको निर्देशन मध्यनजर गर्दै कमभन्दा कम कर्मचारीबाट बढीभन्दा बढी सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ ।
लकडाउनको असरलाई मध्यनजर गर्दै नबिल बैंकले ग्राहकहरूलाई अतिरिक्त के–कस्ता सुविधा दिएको छ ?
कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रविधितर्फ धकेलेका छौँ । यसका लागि डिजिटल कारोबारमा लाग्ने अतिरिक्त शूल्क कटौती गरिएको छ । आफूसँग भएको एटिएम जुन कुनै पनि बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा चार्ज लाग्दैन । डिजिटल कारोबारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ग्राहकलाई शाखाबाट सेवा प्रदान गरेका छौँ । वेवसाइटबाट सञ्चालनमा रहेका शाखाको जानकारी दिएका छौँ, यसै अनुसार ग्राहकले त्यहाँबाट काम लिन सकिन्छ । साथै आफ्नो नजिकको शाखा खुल्ला नभएको अवस्थामा ग्राहक सम्पर्कमा आए कारोबारको प्रकृति हेरेर सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ । हरेक शाखामा गार्ड खटिएका छन् । यद्यपि, बिना सम्पर्क शाखामा आएमा पनि कामको प्रकृति अनुसार गार्डले शाखा प्रमुखलाई सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ ।
सञ्चालित शाखामा ग्राहकको आगमन अवस्था कस्तो छ ?
लकडाउनको सुरुको अवस्थामा ग्राहक आउने दर ह्वात्तै बढेको थियो । अहिले भने कम हुँदै गएको पाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा ग्राहकले दुई कुरा बुझिसकेका छन् । पहिलो भनेको बैंकले लकडाउन भए पनि सेवा प्रवाह गर्छ र अर्को यो समय भनेको सकेसम्म घरमै सुरक्षित हुने सयय हो ।
शाखा सञ्चालनको समयमा के कस्ता समस्या भोग्नुभएको छ ?
अहिले स्टाफलाई ब्रान्चसम्म पुर्‍याउन नै धेरै कठिन भएको छ । सीमित साधनको पास दिएको छ । बैंकको कार्डले छुट पाउने व्यवस्था छैन । ब्रान्च जसोतसो खोले पनि त्यत्ति सजिलै सर्वसाधारणलाई बैंकसम्म आउन गाह्रो छ । सेवाग्राही नै नभए सेवाप्रदायकले कस्लाई सेवा प्रदान गर्ने ? आइहालेका कतिपय ग्राहकहरू सुरक्षित तवरमा आउनुले पनि केही असहजता ल्याएको छ ।
जोखिम मोलेर सेवा प्रदान गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई इन्सेन्टिभ दिनेबारे केही सोच्नुभएको छ ?
सोच्ने होइन कार्य अगाडि बढाइसकेका छौँ । बोर्डबाट नै पास गराएर यो समयमा सेवा प्रदान गरिरहेका स्टाफको इन्युरेन्स कभरेज डबल बनाएका छौँ । साथै अन्य केही इन्सेन्टिभ प्याकेज पनि पहिचान गरेका छौँ । अरू पनि थप गर्ने योजनामा छौँ ।
बैंक सञ्चालनको क्रममा उपत्यका र बाहिरको व्यावस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? जबकि आवतजावतमा नै समस्या छ ?
हुनुपर्ने हरेक क्षेत्रमा हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यति पाइँदैन। बैंकिङ क्षेत्रमा हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा नै विजनेस कन्टिन्युटी प्लान र डिजास्टर रिकभर प्लान बनाउने सिस्टम हुन्छ । यस्ता प्लानमा ब्रान्च म्यानेजरहरूद्वारा नै ब्रान्च रहेको सोसाइटीदेखि स्टाफ रोटेसनसम्मको प्लान बनाइएको हुन्छ । यसलाई नै कार्यन्वयन गर्ने हो । त्यसैले यसमा केही विषेश व्यवस्थापन भन्ने हुन्न रेगुलारिटी नै हुन्छ ।
नोट प्रवाहमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ, नोटलाई कोरोना मुक्त बनाउन तथा जोखिम न्यून गर्ने के कस्ता विधि अबलम्बन गर्दै आउनुभएको छ ?
विधि भनेको सकेसम्म नोटको प्रयोग नै नगरौँ भन्ने हो । नोट बैंकबाट मात्र प्रवाह हुने हैन र एकपटक नोट सेनिटाइज गर्दैमा सधैँलाई पुग्दैन । त्यसैले यसमा नोट उपभोक्ता आफैँ सहज हुने हो । यसको अरू कुनै उपाय नै छैन ।
राष्ट्रबैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातमा ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्यो, राष्ट्रबैंकले कर्जामा छुट, पुनर्कर्जा जस्ता राहतका प्याकेजहरू ल्याएको छ ? के यो प्रयाप्त हो ? तपाईंको धारणा के छ ?
राष्ट्रबैंकले तत्काल लिएको प्याकेज सुरुवाती हो । यसमा यति उति हुनुपर्ने भन्ने अवस्था छैन । अहिले हामी सबै लकडाउनमा छौँ । यद्यपि कोरोना संक्रमण निकै कम छ । यसले भोलि विषम परिस्थिति सिर्जना गर्यो भने अवश्य पनि नेपाल सरकारले थप केही राहत ल्याउँछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । अहिले ल्याएको राहत तत्कालका लागि पर्याप्त छ ।
कोरोना प्रभावको यो समय सन्दर्भमा तपाईं समस्त नेपाली अर्थात् तपाईंका ग्राहकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो समय भनेको घरमा बस्ने समय हो । ‘लकडाउनलाई बाध्यताभन्दा पनि अवसर बनाऔँ’ । घरमै बसेर केही सीप सिक्यौँ भने पनि फलदायी नै हुन्छ । कोरोना संक्रमणको प्रकोपको पनि समय सकिन्छ, सकिन्छ । एक दिन सकिन्छ । त्यसपछि दौडनु त छँदै छ । त्यसैले लकडाउनकाे समय आफन्तसँग बिताएर सही सदुपयोग गर्नुहोस् ।
सोमवार, चैत्र २४ २०७६०६:५८:०७